Izindaba - I-SILIKE yethula isizukulwane esisha se-silicone wax, engathuthukisa indawo engamelana namabala wezinto ze-PP zezinto zasekhishini
I-SILIKE yethula isizukulwane esisha se-silicone wax, engathuthukisa indawo emelana nebala yezinto ze-PP zezinto zasekhishini
Ngokwe-data evela ku-iiMedia.com, ukuthengiswa kwemakethe yomhlaba jikelele kwezinto ezinkulu zasendlini ngo-2006 kwakuyizigidi ezingama-387, futhi kwafinyelela amayunithi ayizigidi ezingama-570 kusukela ngonyaka we-2019; ngokusho kwedatha evela eChina Household Electrical Appliances Association, kusukela ngoJanuwari kuya kuSepthemba 2019, imakethe yonke yokuthengisa izinto zasekhishini eChina Umthamo ufinyelele kumayunithi ayizigidi ezingama-21.234, ukwanda konyaka ngonyaka ngo-9.07%, kanti ukuthengisa okuthengisiwe kufinyelele ku- $ 20.9 billion .
Ngokuthuthuka kancane kancane kwamazinga abantu okuphila, isidingo semishini yasekhishini nayo iya ngokuya inyuka. Ngasikhathi sinye, inhlanzeko nobuhle bezindlu zezinto zasekhishini sekuyinto edingakalayo enganakekelwa. Njengenye yezinto ezisemqoka ekwakhiweni kwemishini yasendlini, ipulasitiki inezinga elithile lokumelana namanzi, kepha ukumelana kwayo no-oyela, ukumelana namabala, kanye nokumelana kokuqala akunamandla. Uma isetshenziswa njengegobolondo lokwenza izinto zasekhishini, kulula ukunamathela ku-grease, intuthu namanye amabala ngesikhathi sokusetshenziswa kwansuku zonke, kuthi igobolondo lepulasitiki lihlikiwe kalula ngesikhathi senqubo yokukhuhla, kushiye imikhondo eminingi futhi kuthinte ukubukeka kwalowo osebenzayo.
Ngokuya ngale nkinga, kuhlanganiswe nokufunwa emakethe, i-SILIKE ithuthukise isizukulwane esisha somkhiqizo we-silicone wax SILIMER 5235, osetshenziselwa ukuxazulula inkinga ejwayelekile yemishini yasekhishini. I-SILIMER 5235 iyiqembu elisebenzayo eliqukethe uchungechunge olune-alkyl-modified silicone i-wax. Ihlanganisa ngempumelelo izici ze-alkyl esebenza ngamaketanga amade esebenza ne-silicone. Isebenzisa ikhono lokunothisa eliphakeme le-wax abicah ebusweni bepulasitiki ukwakha i-wax abicah. Isendlalelo sefilimu se-wax se-silicone esisebenzayo, nesakhiwo se-silicone wax sineqembu elide le-alkyl eliqukethe amaqembu asebenzayo, ukuze i-wax abicah ikwazi ukuboshelwa ngaphezulu futhi ibe nomphumela omuhle wesikhathi eside, futhi ifinyelele ukuncipha okungcono kwamandla angaphezulu , i-hydrophobic ne-oleophobic, ukumelana kweScratch neminye imiphumela.
Ukuhlolwa kokusebenza kwe-Hydrophobic ne-oleophobic
Ukuhlolwa kwe-engeli yokuxhumana kungakhombisa kahle ikhono lobuso bento ukuthi luyoba phobic ezintweni eziwuketshezi futhi lube yisibonakaliso esibalulekile sokuthola i-hydrophobic ne-oleophobic: ukuphakama kwe-engeli yokuxhumana yamanzi noma uwoyela, ngcono ukusebenza kwe-hydrophobic noma uwoyela. Izakhiwo ezimelana ne-hydrophobic, oleophobic kanye nebala zingahlulelwa nge-engeli yokuxhumana. Kungabonakala ekuhlolweni kwe-engeli yokuxhumana ukuthi i-SILIMER 5235 inezindawo ezinhle ze-hydrophobic ne-oleophobic, futhi lapho inani lifakwa kakhulu, izakhiwo ze-hydrophobic ne-oleophobic ezingcono zento leyo.
Okulandelayo umdwebo wesikimu wokuqhathaniswa kokuhlolwa kwe-engeli yokuxhumana yamanzi akhethiwe:
I-PP + 4% 5235
I-PP + 8% 5235
Idatha yokuhlolwa kwe-engeli yokuxhumana imi kanje:
I-engeli yokuxhumana yamafutha / °
I-engeli yokuxhumana yamanzi esetshenzisiwe / °
Stain ukumelana test
Izinto ezilwa nokungcolisa akusho ukuthi ngeke kube khona amabala anamathele ebusweni bento esikhundleni sokunciphisa ukunamathela kwamabala, futhi amabala angasulwa kalula noma ahlanze ngemisebenzi elula, ukuze okubonakalayo kube nomphumela wokumelana namabala kangcono . Okulandelayo, sizocacisa ngokuhlolwa okuningana kokuhlola.
Elabhorethri, sisebenzisa omaka abasuselwa ku-oyili ukubhala ezintweni ezimsulwa ukulingisa amabala esivivinyo sokusula, nokubheka okusele ngemuva kokusula. Okulandelayo yividiyo yokuhlola.
Imishini yasekhishini izobhekana nokushisa okuphezulu nomswakama ophezulu ngesikhathi sokusetshenziswa kwangempela. Ngakho-ke, sivivinye amasampula ngokuhlolwa okubilayo okungama-60 and sathola ukuthi ukusebenza okuphikisayo kwepeni lomaka elibhalwe ebhodini lesampula ngeke kuncishiswe ngemuva kokubila. Ukwenza ngcono umphumela, okulandelayo isithombe sokuhlola.
Qaphela: Kunama- "" "amabili abhalwe ebhodini ngalinye lesampula esithombeni. Ibhokisi elibomvu umphumela osuliwe, futhi ibhokisi eliluhlaza kungumphumela ongasuswanga. Kungabonakala ukuthi ipeni lomaka libhala umkhondo lapho inani lokuhlanganisa elingu-5235 lifinyelela ku-8% lisulwe ngokuphelele.
Ngaphezu kwalokho, ekhishini, sihlala sihlangana nama-condiments amaningi axhumana nemishini yasekhishini, futhi ukunamathiselwa kwama-condiments nakho kungakhombisa ukusebenza okuphikisayo kwento leyo. Elabhorethri, sisebenzisa umsila okhanyayo wesoya ukuphenya ukusebenza kwawo okusabalele ebusweni besampula se-PP.
Ngokuya ngocwaningo olungenhla, singenza isiphetho se-SILIMER 5235 sinezindawo ezingcono zokumelana ne-hydrophobic, oleophobic kanye nebala, sinika indawo ebonakalayo ukusetshenziswa okungcono, futhi yelula isikhathi sempilo yensiza yemishini yasekhishini.